Politika momba ny tsiambaratelo 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Tsy resaka politika momba ny fiainana manokana intsony izany, fa ny fitsipiky ny fitsipiko.
Amin'ny maha tompon'andraikitra ahy amin'ity tranokala ity, te-hanome anao anao ny antoka ara-dalàna lehibe indrindra mifandraika amin'ny fiainanao manokana ianao ary hazavaiko aminao mazava tsara sy mangarahara araka izay azo atao, ny zavatra rehetra mahakasika ny fanodinana ny mombamomba manokana ao amin'ity tranokala ity.
Ity Politika momba ny fiainana manokana ity dia ho manan-kery afa-tsy amin'ny angon-drakitra manokana azo ao amin'ny tranokala, fa tsy azo ampiharina amin'ireo fampahalalana nalain'ny antoko fahatelo tao amin'ny tranonkala hafa, na dia mifandray amin'ny tranokala aza izy ireo.
Ireto fepetra manaraka ireto dia faran'ny fanaka ho an'ny mpampiasa sy ho an'ilay olona miandraikitra ity tranokala ity, ka zava-dehibe ny maka fotoana vitsivitsy hamakiana azy ianao ary raha tsy manaiky izany ianao dia aza mandefa ny antontan-taratasinao manokana amin'ity tranonkala ity.
Nohavaozina tamin'ny 30/04/202020 ity politika ity
Ho an'ny tanjon'ny fepetra voalazan'ny Lalàna voalaza etsy ambony momba ny fiarovana ny data manokana, ny fampahalalana manokana izay alefanao aminay dia hampidirina ao anaty rakitra "USERS OF WEB sy SUBSCRIBERS", fananan'ny Online Servicios Telemáticos SL miaraka amin'ny NIF: B19677095 ary miaraka amin'ny adiresy ao amin'ny C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada). Ity rakitra ity dia nanatanteraka ny fepetra rehetra momba ny fiarovana ara-teknika sy fandaminana natsangana tamin'ny Royal Decree 1720/2007, amin'ny fampandrosoana ny LOPD.
Fandefasana sy firaketana angon-drakitra ankapobeny
Ny fandefasana angona manokana amin'ity tranokala ity dia tsy maintsy atao raha te hifandray, hanome hevitra, hisoratra anarana amin'ny bilaogy emulador.online, hanao fifanarahana amin'ireo serivisy aseho eto amin'ity tranonkala ity ary hividy ireo boky amin'ny endrika nomerika.
Ary toy izany koa, ny tsy fanomezana ny angon-drakitra manokana nangatahana na tsy fanekena ity politika miaro ny data ity dia midika fa tsy azo atao ny mamandrika amin'ny votoaty sy ny fanodinana ny fangatahana an'ity tranonkala ity.
Tsy ilaina ny manome data doka ho an'ny fisavana amin'ity tranonkala ity.
Inona ny angon'ity tranokala ity sy ny antony
Nohavaozina tamin'ny 25/03/2018 ity politika ity
emulator.online dia hanangona ny Data manokana momba ny mpampiasa, amin'ny alàlan'ny endrika an-tserasera, amin'ny alàlan'ny Internet. Ny angona manokana voangona, arakaraka ny tranga tsirairay, dia mety ho, ankoatry ny hafa: anarana, anarana, anarana mailaka ary fidirana fidirana. Toy izany koa, amin'ny raharaha serivisy fifanarahana, fividianana boky sy dokam-barotra, dia hanontaniako amin'ny mpampiasa ny angona sasany momba ny endrika banky na fandoavam-bola.
Ity tranonkala ity dia tsy maintsy mitaky angon-drakitra ampy ho an'ny anton'ny fanangonam-bokatra ary natao izany:
Manamaivana ny fizotran'ny data manokana.
Lazao araka izay azo atao ny angon-drakitra manokana.
Manome fangaraharana ny fiasa sy ny fanodinana ny angon-drakitra manokana izay natao ato amin'ity tranokala ity.
Avelao ny mpampiasa rehetra hanara-maso ny fizotry ny angon-dry zareo atao amin'ity tranokala ity.
Mamorona sy manatsara ireo singa fiarovana mba hanolotra anao ny fepetra momba ny fizahana fiarovana tsara indrindra.
Ny tanjon'ny angon-drakitra nangonina tao anatin'ity vavahady ity dia ireto manaraka ireto:
Mamaly ny fepetra takian'ny mpampiasa es. Ohatra, raha avelan'ny mpampiasa ny mombamomba azy ireo amin'ny iray amin'ireo endrika mifandraika aminay, azonay atao ny mampiasa ity angona ity mba hamaliana ny fangatahanao sy hamaliana ireo fisalasalana, fitarainana, fanehoan-kevitra na ahiahy mety anananao momba ny fampahalalana tafiditra ao amin'ilay tranokala. Web, ny serivisy omena amin'ny alàlan'ny tranokala, ny fanodinana ny angon-drakitrao manokana, ny fanontaniana momba ireo lahatsoratra ara-dalàna tafiditra ao amin'ny tranokala, ary koa ireo fangatahana hafa mety anananao.
Raha mitantana ny lisitry ny famandrihana, mandefasa gazety, fampiroboroboana ary tolotra manokana, amin'ity tranga ity, hampiasa ny adiresy mailaka sy ny anarana nomen'ny mpampiasa ihany izahay rehefa manao famandrihana.
Ny mandefitra sy mamaly ny fanehoan-kevitr'ireo mpampiasa ao amin'ny bilaogy dia.
Miantoka ny fanarahana ny fepetra fampiasana sy ny lalàna manan-kery. Mety tafiditra ao anatin'izany ny fampivelarana ny fitaovana sy ny algorithma izay manampy an'ity tranonkala ity hiantoka ny tsiambaratelo momba ny angona manokana angoniny.
Hanohanana sy fanatsarana ireo tolotra atolotry ity tranokala ity.
To tsena vokatra sy serivisy atolotra amin'ity tranokala ity.
Amin'ny tranga sasany, ny fampahalalana momba ny mpitsidika ity tranokala ity dia zaraina tsy fantatra na ampifangaroana amin'ny antoko fahatelo toa ny mpanao dokambarotra, mpanohana na mpiara-miasa ho tanjona hanatsarana ny seriviko ary manara-maso ny tranokala. Ireo asa fanodinana rehetra dia halamina araky ny fitsipika ara-dalàna ary ny zonao rehetra momba ny fiarovana data dia hajaina araky ny fitsipika misy ankehitriny.
Amin'ny tranga tsirairay dia manana zo feno amin'ny angon-drakiny manokana ny mpampiasa ary ny fampiasana azy ary mety hampiasa azy ireo amin'ny fotoana rehetra.
Na izany na tsy izany, ny tranokala dia hamindra ny angon-drakitra manokana an'ny mpampiasa azy amin'ny antoko fahatelo nefa tsy mampahafantatra azy ireo sy mangataka ny faneken'izy ireo.
Serivisy natolotry ny antoko fahatelo amin'ity tranokala ity
Manome serivisy ilaina amin'ny fampandrosoana ny asany, mizara ny angon-droa amin'ireto mpamatsy manaraka ireto ao anatin'ny fepetra mifanaraka amin'izany ny serivisy ao amin'ny Online Servicios Telemáticos SL.
Tranonkala Web: WordPress.org
Serivisy atolotra sy fandefasana gazety: MailChimp. 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308.
Ny fitahirizana ny rahona sy ny backup: Dropbox -Drive, Wetransfer, serivisy Web Amazon (Amazon S3)
Rafitra fisamborana angon-drakitra manokana izay angonin'ity tranokala ity
Mampiasa rafitra fisamborana ny mombamomba ny tena manokana ny tranonkala. Ity tranonkala ity dia mitaky ny fanekena mialoha ny mpampiasa hanodinana ny angon'izy ireo manokana ho an'ny tanjona voatondro.
Zon'ny mpampiasa ny manafoana ny fanekeny alohan'ny fotoana rehetra.
Rafitra hanangonana ny mombamomba anao ampiasain'ny emulator.online :
Famoahana famandrihana votoaty: Ao anatin'ny tranonkala dia misy endrika maro hamelomana ny famandrihana. Jereo ao amin'ny boaty mailakao. Ny mpampiasa dia tsy maintsy manamarina ny famandrihany mba hanamarinana ny adiresy mailaka. Ny angona omena dia hampiasaina manokana handefasana ny Newsletter ary hitazomana anao havaozina amin'ny vaovao sy tolotra manokana, natokana ho an'ny mpamandrika es. Ny Newsletter dia tantanan'i MailChimp.
Rehefa mampiasa ny serivisy ao amin'ny sehatra MailChimp hitantanana ny fampielezan-kevitra amin'ny marketing mailaka, ny fanaraha-maso ny famandrihana ary ny fandefasana fantsom-baovao dia tokony ho fantatrao izany MailChimp Manana mpizara any Etazonia misy ny mpizara ary noho izany ny angon-drakinao manokana afindra amin'ny sehatra iraisam-pirenena izy ireo any amin'ny firenena izay heverina ho tsy azo antoka aorian'ny fanonganana ny Harbour Safe. Amin'ny alàlan'ny fanaovana famandrihana dia ekenao ary ekenao fa ny angon-drakitrao dia tahirin'ny sehatra MailChimp, miorina any Etazonia, mba hitantanana ny fandefasana ireo taratasim-pifandraisana mifandraika amin'izany. MailChimp dia ampifanarahana amin'ireo fehezan-dalàna mahazatra an'ny EU momba ny fiarovana ny angona.
Fomba famoahana hevitra: Ahitana endrika iray hanehoana lahatsoratra lahatsoratra. Ny mpampiasa dia afaka mametraka fanehoan-kevitra amin'ireo lahatsoratra izay avoaka. Ny angon-drakitra manokana tafiditra ao anaty endrika hampidirana ireo fanehoan-kevitra ireo dia hampiasaina manokana amin'ny antonony sy hamoahana azy ireo.
Fandraisana mifandray: Misy ihany koa ny fangatahana fifandraisana ho an'ny fanontaniana, soso-kevitra na fifandraisana matihanina. Amin'ity tranga ity dia hampiasaina ny adiresy mailaka hamaly azy ireo ary handefa ny vaovao ilain'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny tranokala.
Cookies: Rehefa misoratra na mivezivezy amin'ity tranokala ity ny mpampiasa dia «voatahiry ny« cookies »dia afaka manatona ny mpampiasa amin'ny fotoana rehetra politika mofomamy hanitatra ny fampahalalana momba ny fampiasana mofomamy sy ny fomba hanakanana azy ireo.
Download Systems: Ao amin'ity tranokala ity dia afaka misintona ireo votoaty samihafa izay ampidirina tsindraindray amin'ny endrika text, video ary audio. Amin'ity tranga ity dia ilaina ny mailaka iray hananganana ny endrika famandrihana. Ny fampahalalana ataonao dia ampiasaina ho an'ny tanjona voatondro ho an'ny mpanjifa.
Namidy boky: Amin'ny alàlan'ny vavahadin-tserasera dia afaka mividy boky sy infoproduces avy amin'ny Online Servicios Telemáticos SL, amin'ity tranga ity, takiana ny mombamomba ny mpividy (Anarana, ny anarany, ny laharana an-tariby, ny adiresy ary ny e-mail) amin'ny alàlan'ny sehatra Paypal ho endrika fandoavana.
Azon'ny mpampiasa atao unsubscribe amin'ny fotoana rehetra amin'ireo serivisy nomen'i emulador.online the same Newsletter.
Ho hitan'ny mpampiasa ato amin'ity tranokala ity, pejy, fampiratiana, mpanohana, programa afiliana izay miditra amin'ny fahazotoan'ny fitadiavan-kaonty mpampiasa hananganana mombamomba ny mpampiasa ary mampiseho ny dokambarotra mpampiasa miankina amin'ny tombontsoa sy ny fahazaran'izy ireo mijery. Tsy fantatra anarana izany fampahalalana izany ary tsy fantatra ny mpampiasa.
Ny fampahalalana omena ireo tranonkala narotsaka na rohy mifandray dia miankina amin'ny politika momba ny tsiambaratelo ampiasaina amin'ireo tranonkala ireo ary tsy hiankina amin'ity politika manokana ity. Noho izany, manoro hevitra mafy ny mpampiasa izahay mba hamerina amin'ny an-tsipiriany ny politika momba ny fiainana manokana momba ny rohy mifandray.
Politikan'ny tsiambaratelo momba ny doka atolotra ao amin'ny Adsense: Google Adsense.
Politika momba ny fiainana manokana momba ny fanaraha-maso loharanom-pahalalana ampiasaina amin'ity tranokala ity:Google (Analytics)
Ny Emulator.online dia mandalina ihany koa ny safidin'ny mpampiasa azy, ny toetrany amin'ny demografika, ny làlam-pifamoivoizany ary ny fampahalalana hafa miaraka hahafantarana tsara hoe iza ny mpihaino antsika ary inona no ilain'izy ireo. Ny fanarahana ny safidin'ny mpampiasa anay dia manampy anay hampiseho aminao ireo doka ilaina indrindra.
Ny mpampiasa ary, amin'ny ankapobeny, olona voajanahary na ara-dalàna, dia afaka manangana rohy hyperlink na fitaovana fampifandraisana (ohatra, rohy na bokotra) avy amin'ny tranokalany mankany amin'ny emulator.online (ny "Hyperlink"). Ny fametrahana ny Hyperlink dia tsy midika velively amin'ny fisian'ny fifandraisana misy eo amin'ny emulator.online sy ny tompon'ny tranokala na ny pejin-tranonkala niorenan'ny Hyperlink, na ny fanekena na fankatoavana avy amin'ny emulator.online ny atiny na tolotra. Na izany na tsy izany, ny emulator.online dia manan-jo handrara na hanafoana ny rohy mankany amin'ny tranokala amin'ny fotoana rehetra.
Azon'ny mpampiasa atao unsubscribe amin'ny fotoana rehetra ny serivisy nomen'ny emulador.online the same Newsletter.
Ny mahamarina sy ny marina ny data
Ny Mpampiasa dia manome antoka fa ny angona manokana omena amin'ny alàlan'ny endrika samihafa dia marina, ka voatery hampita ny fanovana azy ireo. Toy izany koa, ny Mpampiasa dia manome antoka fa ny fampahalalana rehetra omena dia mifanaraka amin'ny toe-javatra misy azy ireo, fa vaovao sy marina izany. Ho fanampin'izany, ny mpampiasa dia manolo-tena hitazona ny angon-drakitra fanavaozany amin'ny fotoana rehetra, tompon'andraikitra amin'ny tsy fahatomombanana na ny lainga amin'ny angon-drakitra omena sy ny fahasimbana mety aterak'izany amin'ny Online Servicios Telemáticos SL amin'ny maha tompon'ny web emulator.online.
Fampiasana ny zon'ny fidirana, fanitsiana, fanafoanana na fanoherana
Ireto ny zon'ny mpampiasa:
Zo ny manontany hoe inona ny angon-drakitra manokana ataontsika momba ilay mpampiasa amin'ny fotoana rehetra.
Zo ny hangatahinay hanavao na hanitsy ny angon-drakitra tsy mety na efa lany daty efa notehirizinay momba ny mpampiasa.
Zo raha tsy misoratra anarana amin'ny fifandraisana fifampiraharahana izay azontsika alefa any amin'ilay mpampiasa.
Azonao atao ny mitarika ny serasera sy mampihatra ny zon'ny fidirana, fanitsiana, fanafoanana sy fanoherana Amin'ny alàlan'ny paositra any amin'ny C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada) na amin'ny alàlan'ny e-mail: info (at) emulador.online miaraka amin'ny porofo manan-kery amin'ny lalàna, toy ny photocopy an'ny DNI na mitovy aminy, izay manondro ny lohahevitra "PROTECTION DATA".
Ny mpampiasa dia nanambara fa efa nampahafantarina azy ireo ny fepetra momba ny fiarovana ny angon-drakitra manokana, ny fanekena sy ny fanekena ny fitsaboana azy ireo amin'ny Internet servicios Telemáticos SL amin'ny fomba sy ny tanjona voalaza ao amin'ny fampandrenesana ara-dalàna.
Ny fanovana ny politikam-piainan'ny fiainana manokana
Ny Online Servicios Telemáticos SL dia manan-jo hanova ity politika ity mba hampifanaraka azy amin'ny lalàna na fiambenana vaovao ary koa ny fomba amam-panao amin'ny indostria. Amin'ny tranga toy izany, ny Mpanome tolotra dia hanambara amin'ity pejy ity ireo fanovana nampidirina am-piandrasana mialoha ny fampiharana azy ireo.
Mifanaraka amin'ny LSSICE, Online servicios Telemáticos SL dia tsy manao fanao SPAM, noho izany dia tsy mandefa mailaka ara-barotra izay mbola tsy nangatahan'ny mpampiasa na nanome alalana azy ireo, indraindray dia afaka mandefa fampiroboroboana manokana sy tolotra manokana ary antoko fahatelo, amin'ny tranga izay ahazoanao manome alalana ireo mpandray.
Vokatr'izany, isaky ny endrika iray ao amin'ny tranokala, ny mpampiasa dia manana ny fahazoana manome fanekena mazava handray ny "Gazetiko", na inona na inona fampahalalana ara-barotra angatahina ara-potoana. Azonao atao ihany koa ny manafoana ny famandrihanao mandeha ho azy ao amin'ireo Newsletters.